Fọdụ nchoputa na-atọ ụtọ site na ọmụmụ BlueKai gbasara usoro azụmaahịa data. Echere m na ọ na-adọrọ mmasị na ọfụma nke ịdị mkpa mgbe ọ bịara na ohere obe-obe / obe kachasị dị mkpa. Ọ bụ ezie na ịchụnta ihe nchọta na-aga n'ihu na-abụ isi, ọ dabara nke ọma. Ekwenyere m na nke ahụ bụ n'ihi okwu nzuzo nke Google na idozi algọridim ha na-egbu ụlọ ọrụ SEO. Ndị na-ere ahịa agaghachila ile anya na nnukwu foto na ihe kacha emetụta ego ha nwetara
Shoppingzụ ahịa ọnlaịnụ na-eto eto n’afọ karịa afọ… ma ọ dịghị ebelata. BlueKai weputara ihe omuma ndia na nkwadebe maka oge ahia ezumike a na ntaneti. Site na infographic: Azụmaahịa ịntanetị na-arụ ọrụ buru ibu n'oge ezumike ịzụ ahịa ezumike ọ bụla kwa afọ kemgbe mmalite ya. Mana ka ahia Internetntanetị na-adịwanye nkọja [na ndị na-azụ ahịa na-aghọwanye web-savvy], ịzụ ahịa ezumike na-enwe mgbanwe dị omimi. N'okpuru ebe a bụ usoro ndị dị mkpa site na ịzụ ahịa 2010